Readdle Zvinyorwa zvakagadziriswa nekuwedzera seVPN sevhisi | IPhone nhau
Imwe yeanonyanya kufarirwa mafomu muApp Store kuchengetedza mafaera edu, Zvinyorwa kubva kunogadzira Readdle, ichangobva kuvandudzwa ichisvika vhezheni 7.4 uye kuwedzera sevhisi yeVPN sevhisi yatinogona kushandisa kuburikidza neyedu kifaa kwete chete kuwana zvinyorwa zvedu.
Kune avo vasingazive Zvinyorwa, chishandiso ichi chinotibvumidza kuwana ese mafaera atakachengetera kwazvino pachigadzirwa chedu, pamwe nemasevhisi ekuchengetedza gore, maseva ewebhu pamwe nekubatanidza webhu browser. inotibvumidza kurodha zvirimo kune yedu kifaa.
VPN masevhisi, senge ari mune yazvino Zvinyorwa zvinyorwa, gadzira yakavanzika network iyo chengetedza kufamba kwedu uye inodzivirira mupi webasa redu kubva pakuziva nekunyora zviitiko zvedu painternet.
Uye zvakare, zvinotibvumidzawo kushanyira kana kushandisa webhu masevhisi nekushandisa imwe nzvimbo isiri yedundiko kuti, kubatana kubva kune dzimwe nyika, tichisvetuka kuremara kwenzvimbo kwatinowana kwemamwe masevhisi kana mapeji ewebhu.
Iyo VPN sevhisi iyo Readdle inotipa isu kuburikidza nekushandisa kweMagwaro, inotibvumidza kutarisa zvemahara ne50 MB pazuva, sevhisi yeVPN inoshanda mukati meiyo system kwete chete kuburikidza neyekushandisa browser. Readdle inotaura kuti yedu yekuvhura dhata haina kuchengetwa saka haitengeswe kune vechitatu mapato kushambadzira zvinangwa.
Kana tichida shandisa iyi nyowani yeVPN sevhisi kubva kuReaddle pasina zviyero, ino mutengo pa98,99 euros pagore. Isu zvakare tine mukana wekubata sevhisi iyi pamwedzi pamatanho e13,49 euros pamwedzi.
Sarudzo mbiri idzi dzine mazuva manomwe-ekuyedza. Kana iwe ukaedza chero eaya masevhisi, iwe unofanirwa kuziva kuti mushure memazuva manomwe, iyo huwandu hwesarudzo yakasarudzwa ichabhadharwa kuaccount yako, saka zvinokurudzirwa kuinyora pasi pakarenda kuti ubvise kunyoreswa zvakananga kuti zvidzivirire kutyisa uye zvisina basa mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Readdle Zvinyorwa zvakagadziridzwa nekuwedzera seVPN sevhisi